I-PORTAL VELL ALTEA - LA BARRETA
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Raúl
IPortal Vell Altea iyiqoqo lezindawo zokuhlala izivakashi zaseMedithera eCalle Mayor de Altea. Ngalinye liqanjwe ngamabhishi edolobhana lakithi. Amandla abantu ababili abanakho konke okudingayo ukuze ujabulele amaholide akho komunye wemigwaqo ethathwe izithombe nenhle kakhulu yase-Altea. Sinamagumbi engeziwe esakhiweni esifanayo uma kwenzeka ufuna ukujabulela nomndeni noma abangani. Ukupaka kulula imizuzu emi-5 nje ukuhamba. BHEKA UGUSHI OLUYITHANDAYO!
I-PORTAL VELL ALTEA - LA BARRETA itholakala endaweni engenakunqotshwa, khona kanye enhliziyweni yedolobha elidala eliphakathi kwePortal Vell nePlaza de la Iglesia. Kunamathala amaningi, izitolo, imigwaqo eboshwe ngamatshe, izindawo zokubuka... ezikulindile.
4.93 ·44 okushiwo abanye
Umakhelwane ugcina yonke i-charm yempilo yonke, e-Altea le mininingwane ihlonishwa kakhulu futhi uma ubuya ngemva kweminyaka eminingi, uzobona ukuthi okuncane noma akukho lutho olushintshile.
Sinikeza ukuzimela okuphelele ezivakashini zethu ngesikhathi esifanayo lapho sisedolobheni elifanayo elitholakalayo uma kudingeka. Siyathanda ukweluleka ngoba siyaziqhenya ngokuba ngabase-Altea futhi kithina akukaze kube inkathazo.
URaúl Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: VT-474636-A